Somaliland ama xaafaday u kala googo’i ama iyadoo gurguuraneysa ayey Muqdisho tagin (daawo) – Radio Daljir
Somaliland ama xaafaday u kala googo’i ama iyadoo gurguuraneysa ayey Muqdisho tagin (daawo)
Nofeembar 10, 2018 4:02 g 0
Sidii loo doortay Madaxweyne Muuse Biixi, Somaliland waxay ay gashay marxalad cusub iyo qaybsanaan siyaasadeed oo wadata dagaal sokeeye iyo duullaan lala beegsaday Puntland. Duullaankii Puntland kabacdi Somaliland waxaa ka dillaacay jabhad hubeysan oo uu hoggaamiye u yahay Korneel Caarre. Korneylka ayaa dagaal ka wada badanaa bariga Sanaag, kana dhigay deegaan aan mamulka Somaliland ka talin.
Dhanka Sanaag Bari Puntland, badanaa deegaanku marka laga reebo magaalada Ceerigaabo oo si qabiilaysan loo wada deganyahay waa mid gacanta Puntland dib ugu soo laabatay.
Waxgaradka Somaliland, siiba Xisbiga Waddani, ayaa ka digay kala qaybsanaanta siyaasadeed ee sii baahaysa iyo kala durugga bulsho ee Somaliland, kaas oo laga digay in uu keeni karo burubur maamul iyo mid bulsho.
Farmaajo oo soo gabagabeyeey socdaalkiisi Itoobiya
Aqoon isweydaarsi Bosaaso loogu qabtay Dhaqaatiirta Puntland ka howlgasha ( dhegayso )